जतततै बलात्कार हुदा पनि महिला रास्ट्रपति मौन किन? किन फाँसी हुदैन बलकारिलाइ? - info4nepal
जतततै बलात्कार हुदा पनि महिला रास्ट्रपति मौन किन? किन फाँसी हुदैन बलकारिलाइ?जुन देश मा महिला रास्ट्रपति छन त्यहा दिनहु बलत्कार हुदा पनि किन मौन छिन रास्ट्रपति ?
कांग्रेसको अबको सभापति गगन थापा पनि हुनसक्छन – गुरुराज घिमिरे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य (भिडियो)
मलाइ यो स्थानसम्म ल्याउने वास्तविक हिरोलाई सबैले चिन्नुहोस र शेयर गरिदिनुहोला